Vaovao - Blog Product: Ahoana no hanitarana ny androm-piainan'ny antsamotady fanondrotana
Amin'ny fampiasana ara-dalàna, raha simba ny velaran'ny antsamotady dia tsy hiantraika amin'ny fahombiazany fotsiny izany, fa hitondra loza mety hitranga amin'ny fiarovana ihany koa. Noho izany, mandritra ny fampiasana ny antsamotady dia tsy maintsy ilaina ny mpiasa matihaninamanatanteraka fanaraha-maso mifandraika amin'izany. Raha vantany vao hita ny gorodona na ny akanjo ivelany dia mila amboarina ara-potoana izy io. Ny antsamotady tsara kalitao dia manana fiainana serivisy lava, fa raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny mpampiasa dia mety hiteraka fahasimbana na fitafiana ambonin'ilay antsamotady.
1. Mila izany tazomin'ny matihanina. Aorian'ny fampiasana azy dia tokony hapetraka eo amin'ny talantalana matihanina fa tsy atao an-tsirambina. Tokony hadio sy hanana rivotra ny tontolo iainana.
2. Manaova asa tsara amin'ny fiarovana ny harafesina. Raha apetraka ao anaty tontolo mando mandritra ny fotoana maharitra ilay antsamotady dia mora be ny miteraka harafesina ambonimbony. Rehefa mitazona ny antsamotady,fiarovana ny harafesinatokony horaisina ny fepetra. Ankoatr'izay, ny antsamotady dia tsy azo apetraka amin'ny tontolo iainana maripana.
3. Mandritra ny fotoana maharitra dia hisy vovoka sy tasy menaka sasantsasany. Noho izany, mila izany ny mpampiasadiovy tsy tapaka ny vokatra. Manoloana ny tasy menaka tsy azo kosehina madio dia tokony hampiasaina ireo mpanadio manokana. Ankoatry ny fanadiovana dia ilaina ihany koa ny manisy menaka manosotra tsy tapaka hanenenana ny fikorontanana mandritra ny fandidiana.
Raha toa ka misy kileman'ireto manaraka ireto ny antsamotady webbing-nao, azafady, ajanony ny fampiasana azy ireo.